Google ga eme ka nyocha abuo site na ndabara maka onye obula | Site na Linux
Google ga - eme ka nyocha abụọ dị na ndabara maka onye ọ bụla
Google kpugherer n'oge na-adịbeghị anya ị na-arụ ọrụ ime ka ndị ọrụ niile bido iji nyocha ihe abụọ (2FA), nke nwere ike igbochi ndị na-awakpo ị nweta akara nke akaụntụ gị site na iji nzere ndị mebiri emebi ma ọ bụ site na ịkọ nkọ okwuntughe.
N'oge nke ụbọchị okwuntughe ,bọchị, Google kwupụtara na ọ ga-eme ngwa ngwa rụọ ọrụ nke ihe nyocha abụọ maka ndị ọrụ niile.
Mark Risher, onye nduzi nke njikwa ngwaahịa, njirimara na nchekwa onye ọrụ na Google kwuru, sị:
“May gaghị amata ya, mana okwuntughe bụ ihe kachasị egwu nye nchekwa gị na ntanetị: ha dị mfe izu ohi, sie ike icheta, na-agwụ ike ijikwa. Ọtụtụ mmadụ na-eche na paswọọdụ kwesịrị ịdị ogologo ma gbagwojuru anya dị ka o kwere mee, mana n'ọtụtụ ọnọdụ nke a nwere ike ime ka ihe nchebe dịkwuo elu. Okwuntughe siri ike na-eme ka ndị ọrụ jiri ha karịa otu akaụntụ; n'ezie, 66% nke ndị America na-ekweta na-eji otu paswọọdụ na ihe karịrị otu saịtị, na-ahapụ ndị a niile akaụntụ adịghị ike ma ọ bụrụ na otu ada ada.
“N’afọ 2020, nyocha maka‘ etu nchekwa si bụrụ paswọọdụ m ’ji 300% mụbaa. Na nwute, ọbụlagodi okwuntughe kachasị nwee nchebe nwere ike imebi ma jiri onye na-awakpo ya mee ihe, ya mere, anyị etinyela ego na njikwa nchekwa nke na-egbochi gị iji okwuntughe adịghị ike ma ọ bụ nke mebiri emebi. "
Mbugharị iji mee ka nyocha ihe abụọ dị na-akpaghị aka Ebumnuche iji bulie nchebe nke akaụntụ njirimara Google site na iwepu “ihe iyi egwu kachasị mkpa” nke na-eme ka hacking rụọ ọrụ: okwuntughe nke siri ike icheta yana nke ka njọ, nke zuru ohi
Dị ka Mark Risher si kwuo, otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chebe akaụntụ megide paswọọdụ ọjọọ ma ọ bụ nke gbawara agbawa bụ ịtọlite ​​nkwenye nke abụọ, ụzọ ọzọ maka akaụntụ gị iji gosi na ọ bụ njikọ gị n'ezie. O chetara na Google na-eme nke a ọtụtụ afọ "na-ahụ na echekwara akaụntụ Google gị site na ọkwa nkwenye dị iche iche."
Dị ka nzọụkwụ mbụ kwupụta na usoro a, ụlọ ọrụ ga-ajụ ndị ọrụ ndị nyegoro ikike ihe abụọ mee ka ha gosi aha ha site na ịpị ozi sitere na Google na ama ha oge ọ bụla ha banyere.
Anyị ga-ebido n’oge adịghị anya. Na-akpaghị aka mee ka nyocha abụọ maka ndị ọrụ nwere akaụntụ ahaziri nke ọma. (Can nwere ike ịlele ọnọdụ nke akaụntụ gị na anyị Nche Control). Iji ekwentị mkpanaaka gị ịbanye abanye na-enye ndị ọrụ ahụmịhe nleba anya nke ọma karịa okwuntughe naanị. "
Maka ndị gị nwere ike inwe ike ịme nyocha abụọ maka akaụntụ Google gị ugbu a gaa na njikọ ndị a Pịa na bọtịnụ "Bido" ka ịgbakwunye mgbakwunye nchekwa ọzọ.
Ozugbo enyere ihe abụọ aka na akaụntụ gị (ahazi ka ọ rụọ ọrụ site na koodu ozi ederede / olu, ngwa Google Authenticator, ma ọ bụ jiri igodo nche), ị ga-egbochi nnweta na-enwetaghị ikike site na ịmepụta akwa agbakwunyere agbakwunyere iji gbochie mbọ nbanye.
Nke a pụtara na ndị mwakpo agaghị enwe ike ịchịkwa ọbụna ma ọ bụrụ na ha jikwaa izuru gị nzere, ma ọ bụrụ na ha nwekwara ohere na ngwaọrụ gị iji gosi na gị obi nbanye nbanye.
Mgbe enyere 2FA aka, a ga-akpali gị ịbanye paswọọdụ gị, dị ka ọ dị na mbụ, oge ọ bụla ị banyere n'ime akaụntụ Google gị. Agbanyeghị, ịkwesịrị ikwenye njirimara gị site na iji koodu zitere site na ozi ederede, oku olu ma ọ bụ ngwa mkpanaaka. Ọ bụrụ na ị nwere paswọọdụ, ịnwekwara ike itinye ya na ọdụ ụgbọ USB gị iji kwado na ị na-achọ ijikọ.
“Anyị na-na-tụnyere elu nche teknụzụ n'ime ngwaọrụ iji mee ka a multi-ihe Nyocha uzo na ọbụna karị ala karịa paswọọdụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị jikọtara igodo nche anyị ozugbo na ngwaọrụ gam akporo ma bido ngwa Google Smart Lock anyị maka iOS. Ndị ọrụ nwere ike iji ekwentị ha ugbu a dị ka ụzọ nyocha nke abụọ. "
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa dị na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Google ga - eme ka nyocha abụọ dị na ndabara maka onye ọ bụla
FragAttacks, usoro nke adịghị ike na ọkọlọtọ Wi-Fi na-emetụta ọtụtụ nde ngwaọrụ